Warbixin: Doorka Imaaraadka Ee Isku Xidhka Addis Ababa, Asmara Iyo Muqdisho | Hangool News
Warbixin: Doorka Imaaraadka Ee Isku Xidhka Addis Ababa, Asmara Iyo Muqdisho
Hangoolnews:- Wefti heer sare ah oo ka socda dawladda Ereteriya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Weftiga oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Ereteriya Cismaan Saalax waxa soo dhaweeyay ra’isal wasaare Khayre waxaanu weftigu kulan la qaatay madaxweyne Farmaajo.
Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kalmadihiisa soo dhawaynta ku sheegay in weftiyada labada dal is waydaarsadeen muujinayaan ka go’aanshaha labada dhinac ee balaadhinta xidhiidhka Soomaaliya iyo Ereteriya. Waxa uu sheegay in
helitaanka Geeska Afrika oo nabdoon muhiim u yahay dhammaan horumarka dalalka Geeska. Wasiir Cismaan Saalax oo sheegay in bookhashadiisu daba socoto tii Farmaajo ku tagay Asmara waxa uu sheegay in dalkiisu xiisanayo isku xidhka Muqdisho iyo Asmara. Waxa uu sheegay in ay doonayaan isku xidhka dhanka diblamaasiyadda iyo dhaqaalaha.
Jabuuti oo ka cadhaysan Cilaaqaadka Muqdisho iyo Asmara Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dhawaan u yeedhatay safiirkeeda Muqdisho kadib markii madaxweyne Farmaajo ku baaqay in cunaqabataynta hubka laga qaado Ereteriya. Waxay sheegtay in aanay ka filayn Soomaaliya oo ay dadaal badan galiyeen in ay si dhib yar u taageerto Asmara.
Siyaasiyiinta Somaliland ayaa u arka in Jabuuti abaalkeeda heshay maaddaama ay Somaliland indhaha ka lalinaysay waxaana sidaas u dambeeyay oo shalay sheegay Eng Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID. Doorka Imaaraadka ee Ereteriya iyo Itoobiya_Somalia Sida ay shalay daabacday majalada African Arguments oo arrimaha Afrika ka faalloota dawladda Imaaraadka ayaa ka dambeysay xallinta colaaddii 20 sanno dhex taallay Itoobiya iyo Ereteriya. Sidoo kale waxay labadan dal si weyn u daneeyeen Soomaaliya oo ay si degdeg ah xidhiidhkeeda kor ugu qaadeen taas oo u muuqata in ay gadoon galisay dawladda Jabuuti oo ay siyaasad ahaan is hayaan Imaaraadka.
“Xaqiiqdii, Isu Tagga Imaaraadka Carabta ayaa kaallin muhiim ah oo daaha dabadiisa ah ka qaatay heshiiska ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed iyo madaxweynaha Ereteriya Isaias Afwerki.
Labadan nin waxay la kulmeen hoggaamiyeyaasha Imaaraadka ka hor iyo
intii lagu guda jiray dib u heshiisiintaba, waxaanay la lahaayeen xidhiidh joogto ah,” Sidaas ayaa lagu yidhi warbixinta African Argument oo dulucdeedu tahay faa’iidada ay Itoobiya ka heshay loolanka dalalka Carbeed.
Inkasta oo aanay Soomaaliya iyo Imaaraadku isu san bannaanayn oo khilaaf xooggan u dhexeeyo haddana waxay u muuqata in Imaaraadku gacmaha Itoobiya iyo Ereteriya u adeegsanayo danihiisa Soomaaliya maaddaama uu ka hor tagayo galaangalka Qadar oo
Turkiga xaakallo la ah iyo Iiraan oo danaynaysa Geeska Afrika. Dhawaan Sucuudiga oo ay xulufo yihiin Imaaraadka ayaa Soomaaliya ku khasbay in ay taageerto Sucuudiga markii khilaaf soo kala dhex galay Canada sidoo kale Jabuuti ayaa taageero u muujisay Sucuudiga
waxaanay warbixintu arrintaas ku macnaysay mid ishaaraysa in xulufada Imaaraadku raad ku leedahay go’aammada ay gaadhayaan Jabuuti iyo Soomaaliya.
Warbixintan ayaa sheegtay in Itoobiya oo dhexdhexaad ka ah hirdanka Geeska Afrika ku dhexmaraya saddexda tiir ee kala ah Xulufada Sucuudiga iyo Imaaraadku hoggaaminayo, xulufada Qadar iyo Turkiga oo isku dhinac ah iyo Iiraan oo dhankeeda u socota ay tahay
dawladda Kaliya ee Geeska Afrika si fiican uga faa’iidaysatay iyada oo dhammaan dhinacyada ka helaysa maalgashi iyo galangal siyaasadeed.
Source: Wargeyska Waaber